Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus ၏မျက်နှာပြင်အနီပြtheနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း Androidsis
Francisco Ruiz | | Android ထုတ်ကုန်များ, Samsung
အကယ်၍ သင်သည် Samsung Galaxy S8 သို့မဟုတ် S8 Plus ကို ၀ ယ်ရန်မတတ်နိုင်သောကံကောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်စိုးရိမ်နေသည် အနီရောင်မျက်နှာပြင်ပြproblemနာ အတည်ပြုလိုက်သည့် Samsung ကိုယ်တိုင်အရ၎င်းသည်ပြaနာသို့မဟုတ် hardware ချို့ယွင်းချက်မဟုတ်ပါကမကြာသေးမီရက်များအတွင်းစကားပြောရန်ဘယ်လောက်ပေးသနည်း။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော configuration ပြproblemနာဖြစ်သည် ၎င်းကို Android settings ထဲမှအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Samsung ဆိပ်ကမ်းအသစ်ကို ၀ ယ်ရန်မနှစ်သက်သော်လည်းမည်မျှပင်လှပနေစေကာမူ၊ ငါဤသည်အခြားဆောင်းပါး၌ရှင်းပြအဖြစ် Samsung Galaxy S7 (သို့) S7 Edge ကိုအလွန်ကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပါသည် အချို့သော Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တို့၏ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအနီရောင်ဖန်သားပြင်များ နှစ်ခုလုံးဆိပ်ကမ်း၏ setting မှပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းအဖြစ်။
1 Samsung Galaxy S8 ရဲ့အနီရောင်ဖန်သားပြင်ကဘာကြောင့်လဲ။
2 Samsung ရဲ့အဆိုအရ Samsung Galaxy S8 မျက်နှာပြင်နီနီပြSamsungနာကိုဖြေရှင်းနည်း
Samsung Galaxy S8 ရဲ့အနီရောင်ဖန်သားပြင်ကဘာကြောင့်လဲ။
ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်မှမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ဖော်ပြချက်အရ Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus ၏မျက်နှာပြင်နီများပြproblemsနာများသည် ၄ င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြproblemsနာမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ဤဖန်သားပြင်၏အထူးလက္ခဏာဖြစ်သည် SuperAMOLED နည်းပညာဖြင့် Samsung သည်၎င်း၏ Android terminal များပေါ်တွင်အချိန်အတော်အတန်တပ်ဆင်ထားသည်။
ဒီတော့ဒါ "ဆိုပါစို့" အချို့သော Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တို့၏ဖန်သားပြင်များတွင်နီညိုရောင်ပြproblemနာရှိနေသည်။ adaptive mode ကိုရွေးချယ်သောအခါ၎င်းသည် screen configuration တွင်ဖြစ်ပေါ်သောပြaနာဖြစ်သည်SuperAMOLED နည်းပညာဖြင့်ဖန်သားပြင်မျက်နှာပြင်ကိုအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ စမတ်ဖုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းအသုံးပြုနေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ဖန်သားပြင်၏လေသံကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
သော်လည်း ကျွန်တော့်အတွက်တော့ Samsung Galaxy S6 Edge Plus ကိုအသုံးပြုသူအနေနဲ့ Samsung ရဲ့ဒီရှင်းပြချက်ကအတော်လေးခက်ခဲနေပုံရပါတယ်။ terminal screen setting များမှ adaptive screen option ကို enable လုပ်တဲ့အခါကျွန်ုပ်၏ Samsung ကအနီရောင်တောက်ပမှုကိုမတင်ပြသောကြောင့်သင်က၎င်းကိုသံသယ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုပေးပြီးအသုံးပြုသူများ၏အတွေးများသို့မဟုတ်ဆွေးနွေးမှုများကိုမှတ်ချက်ပေးရန်စောင့်ဆိုင်းရမည်။ အချို့သော Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တို့တွင်ဤအနီရောင်မျက်နှာပြင်ပြproblemနာကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့စတင်ရောင်းချသည့်စျေးနှုန်းဖြင့်စတင်ရောင်းချသည့် terminal တစ်ခုအကြောင်းပြောနေသည်မှာသတိရသင့်သည်မှာ၎င်း၏အရိုးရှင်းဆုံးပုံစံသည်အများပြည်သူသို့ရောင်းချရန်ယူရို ၈၀၀ ထက်ကျော်လွန်သည်။
ဆိုလိုတာကငါဆိုလိုတာက၊ သူတို့ဟာဒီအဆင့်မြင့်နည်းပညာထုတ်ကုန်တွေကိုရောင်းချနေတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အတူအခန်းမရှိ၊ အဲဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်နေရာမရှိဘူး သို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့စနစ်က configurations ။
ဤဇိမ်ခံစျေးနှုန်းများရှိဆိပ်ကမ်းများသည်ပြီးပြည့်စုံသောမဂ္ဂဇင်းအခြေအနေတွင်ရောင်းရန်ရှိသည်, အရည်အသွေးကောင်းထိန်းချုပ်မှုကိုဖြတ်ကျော်ပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်၊ နီညိုရောင်အရောင်ပြtheနာကြောင့်ဤဖန်သားပြင်များ၏မကောင်းသောဖွဲ့စည်းပုံသို့မဟုတ်ချွတ်ယွင်းမှုများကိုဖြေရှင်းရန် system configurations များကိုရှာဖွေစရာမလိုဘဲပုံမှန်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်း။
Samsung ရဲ့အဆိုအရ Samsung Galaxy S8 မျက်နှာပြင်နီနီပြSamsungနာကိုဖြေရှင်းနည်း
ဒီကိစ္စမှာသင်ကံမကောင်းရင် Samsung Galaxy S8 (သို့) S8 Plus အတွက်ငွေအမြောက်အများသုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ငရဲ၏နက်နဲသောပင်လယ်များမှထုတ်လွှင့်သောပုံနှင့်တူသောအနီရောင်မျက်နှာပြင်ပြproblemနာSamsung ၏ပြောကြားချက်အရ၎င်းသည် Android settings ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပြitselfနာမဟုတ်ကြောင်း၊ မျက်နှာပြင်, မျက်နှာပြင်, အရောင်ချိန်ခွင်လျှာနှင့်မျက်နှာပြင်အရောင်ကိုရွေးဖို့သပ္ပါယ်မျက်နှာပြင် mode ကိုပိတ်ထားပါ.
အကယ်၍ ၎င်းသည်ဤနည်းအားဖြင့်အမှန်တကယ်ပြုပြင်ထားပါက၎င်းသည် Samsung Galaxy S8 ကိုပိုင်ဆိုင်ရန်ကံမကောင်းပါက၎င်းကိုယ်တိုင်ကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်အတွက်သံသယမဖြစ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ - Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တို့မှာကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိသောဤ adaptive mode သည်ဘာလဲ။.
ငါစီးရီးများသံသယဖြစ်ဖွယ်နှင့်အစဉ်မပြတ်ငါအဆိုးဆုံးအခြေအနေများတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထားတော်မူ၏, \_ tနှင့် Samsung ၏နောက်ခံနှင့်ပိုပြီး နှင့် မကြာသေးမီကပြproblemsနာများ y သိပ်မကြာသေးဘူး!, ငါဒီကိုရီးယားတွေကဒိန်ခဲနဲ့ငါတို့ကိုနောက်တစ်ခေါက်အချိန်ပေးချင်တယ်ထင်တယ်၊ ဒါကငါယုံမှားသံသယရှိနေတာကိုဖုံးကွယ်ဖို့ရှည်လျားလွန်းတာမဟုတ်ဘူး။ ငါထပ်တလဲလဲသူတို့ကအားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာပုန်းရှောင်ချင်သောပြင်းထန်သောပြproblemနာတစ်ခုသို့မဟုတ် shit ဖြစ်ပါတယ်အလောင်းအစား ကျွန်တော်တို့ကို Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus ၏မျက်နှာပြင်ကိုလက်ဖြင့်ချိန်ညှိပေးခြင်း။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်ဝယ်မယ်ဆိုရင်သင် Samsung Galaxy S8 သို့မဟုတ် S8 Plus ကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားမိတယ်၊ သူကလိုက်လျောညီထွေရှိတဲ့ screen mode ရှိရင်တောင်ဒီအသုံးစနစ်ကတန်ဖိုးမရှိဘူး အနီရောင်မျက်နှာပြင်၏ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်သင်၏ Samsung Galaxy S8 သည်ဤပြfromနာနှင့်ကြုံတွေ့ရပါက screen tones များကိုကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus အနီရောင်မျက်နှာပြင်ပြproblemနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
ဒါ့အပြင်အခြားမီဒီယာတွေမှာကျွန်တော်ဖတ်နိုင်ခဲ့တာကနောက်ဆုံးအရောင်အပူချိန်ကိုထိန်းညှိဖို့အနီရောင်ပြင်းအားကိုကိုယ်တိုင်ထိန်းညှိခြင်းအားဖြင့်ဖရန့်စစ်ကိုပြောတာပါ။ subpixel တစ်ခုချင်းစီသည်စုစုပေါင်းရလဒ်အနေနှင့်အလင်းပမာဏအချို့ထုတ်လွှတ်သောကြောင့်၎င်းသည် အဓိကပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာသောမကျေနပ်မှုများ၏မျက်နှာကိုသူတို့ကဆိပ်ကမ်းများပြောင်းလဲနေပုံရသည်၊ လှုံ့ဆော်ပေးသောအရာသည်ထွန်းလင်းတောက်ပသည် (မျက်စိ !!!) ပျောက်ဆုံးသွားသည်။ ကျွန်ုပ်၏နှာခေါင်းကိုအဘယ်ကြောင့်ထိမိသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုနောက်ကျလွန်းလျှင်မင်းတို့အားဤသတင်းကို "redgate" ဆောင်ကြဉ်းလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ မင်္ဂလာပါ
Ezequiel Avila ဟုသူကပြောသည်
ပတ်ပတ်လည် fuck ဆိုတဲ့ရပ်တန့်! စမတ်ဖုန်းအသစ်နှင့်ပြproblemsနာများရှိနေပြီလား
Ezequiel Avila အားစာပြန်ပါ
Mauro Jonay ဟုသူကပြောသည်
အသစ်ကအရာအားလုံးလိုပဲပထမ ဦး ဆုံးအသုတ်အမြဲအချို့အသေးစိတ်ရှိသည်
Mauro Jonay အားပြန်ပြောပါ
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကိုသတိထားကြပါစို့၊ ပန်းရောင်မျက်နှာပြင်သည် HTC m7 ဖြစ်သွားသည်။ စက်ရုံ၏အဆုံးမှာ၎င်းသည်စက်ရုံမှလာသည်ကိုဖြေရှင်း။ မရနိုင်ပါကိုသတိရပါ။ နောင်တွင်ဤပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးမချမှီတွင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ !
Nauzet Texeira Falcón ဟုသူကပြောသည်
မင်းပြောတာကမမှန်ဘူး ကောင်းပြီနီးပါး ...
s8 or s8plus ၏ screen ပေါ်တွင်ထွက်လာသည့်အနီသို့မဟုတ်အဝါရောင် illumination သည်အမှားတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဖန်သားပြင်သည်“ adaptive display” မဟုတ်သကဲ့သို့၎င်းသည်“ settings / screen / blue light filter” တွင်တွေ့နိုင်သော option တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဤ option ကို uncheck လုပ်ခြင်းသည်မျက်နှာပြင်အားအဖြူရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေသည်။ ဒီရွေးစရာကဘာလဲ? ကောင်းပြီ၊ မျက်လုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုရှောင်ရှားရန်အပြာရောင်ပမာဏကိုလျှော့ချပါ။
ဒီ option မှာ iPhone လည်းရှိတယ် (ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က iPhone7s plus)၊ ပြီးတော့အဝါရောင်ဒါမှမဟုတ်အနီရောင်မျက်နှာပြင်လည်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့် s8 or s8plus ကို ၀ ယ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့အဲဒါဟာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အရည်အသွေးရှိပြီးအရည်အချင်းကိုကောင်းမွန်စေတယ်လို့ပြောပါ။ တိုတိုပြောရရင်မနာလိုစရာပဲ။
Nauzet Texeira Falcónအားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ S6 ရှိပြီးမျက်နှာပြင်ကနီလာတယ်။ ငါလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် mode ကိုပိတ်ထားနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်နေဆဲ; ငါအပြာရောင်အလင်း filter ကိုရှာဖွေသည်နှင့်ထို option တွင်ဤပုံစံမရှိပါ။
၎င်းသည်ဆဲလ်ဖုန်းကဲ့သို့ပြnotနာမဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်ပျက်စီးနေကြောင်း၊ သို့သော်အနီရောင်မျက်နှာပြင်သည်မသက်မသာဖြစ်သည်ကိုစိတ်ချစေသည်။
မင်းငါ့ကိုဘာအကြံပေးမလဲ ငါအသစ်တစ်ခုကို update ကိုစောင့်ဆိုင်းသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုယူလိမ့်မည်နည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါအနီရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်မျဉ်းအကြောင်းကိုကြားသိပေမယ့် s6 သို့မဟုတ် s7 ပေါ်ရှိအနီရောင်မျက်နှာပြင်အကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် update သို့မဟုတ်ပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားတရားဝင် Samsung နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုသို့သွားရန်အကြံပေးသည်။ ၎င်းသည် terminal ပျက်ကွက်မှုဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ယင်းပြသနာကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ပြtheနာရဲ့အဖြေကိုငါရှာမယ်ဆိုရင်မင်းကိုငါပြောပြမယ်။
Fran Cerdán Peris ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် galaxy s8 + ရှိပြီး၎င်းသည် software ပြproblemနာမဟုတ်ဟုပြောနိုင်သည်။ ငါပန်းရောင်မျက်နှာပြင်ပြproblemsနာများအတွက်ပြန်လာ2ပြီးသားရှိသည်, ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အရောင်တင့်ရှိသည်သောမျက်နှာပြင်၏အချို့သောဒေသများရှိပါတယ်, ပထမ ဦး ဆုံး terminal ကိုအောက်ခြေမှာအညိုရောင်ကန်တော့ချွန်တင့်, ဒီအသစ်သောတင့်အတွက် ပန်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့်ပုံရသည်ထက် ပို၍ ကြီးမားသောပြisနာဖြစ်သည်။ Valencia ရှိငါ့မွို့ရှိ Media Markt မှနမူနာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန် terminal ကိုငါယူခဲ့သည်။ ဆိပ်ကမ်း ၈ ခုအနက် ၇ ခုသည်ပန်းရောင်ချို့ယွင်းချက်ကိုအတိုင်းထက်အလွန်ဖြစ်စေသည်။ အမှားမပြသောတစ်ခုတည်းသော S7 မှာ S8 ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အခြားဖန်သားပြင်ကုမ္ပဏီမှပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းလုံးဝကွဲပြားခြားနားပုံရသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Samsung Galaxy ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများအားလုံးကိုပျက်ပြားသွားသော Note 8 အပြီးတွင်လွှင့်ပစ်သည့် REDGATE အပြည့်အစုံနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ငါဒီနောက်ဆုံး S7 ကိုပြန်လာမှာဖြစ်ပြီးပြ8နာကိုဖြေရှင်းပြီးလားဆိုတာကိုတစ်လနှစ်လစောင့်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ကဝယ်သူတွေကိုကံကောင်း
Fran Cerdán Peris အားပြန်ပြောပါ
ဟယ်လို။ ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်မှုများကိုတုံ့ပြန်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါမျက်နှာပြင်ကောင်းသည်နေ့၌အလင်းသည်ဖြစ်ရမည်။ ညမှာအနီရောင်ဖြစ်နေပြီလား၊ အဲဒီလိုဆိုရင်၊ ဒါကိုခေါ်ဖို့ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဆဲလ်ဖုန်းကနေ့လား၊ ညလား၊ အလင်းရောင်ကမျက်စိကိုမသက်ရောက်ဘူးဆိုတာခွဲခြားရမယ်၊ အပြာနုရောင်သိလို့သိရလို့ အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်၎င်းသည်၎င်းကိုခေါ်ဆိုရာတွင်၎င်းသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ အိပ်ချိန်တွင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အိပ်ခြင်းတွင်အဆင်မပြေခြင်းများဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အလင်းသည်ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချရန်အနီရောင်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများကိုငြီးငွေ့ခြင်းမရှိစေဘဲ၊ တိုတို, ကျွန်တော်တို့ကိုမထိခိုက်ပါဘူး။
ငါညမှာဖြစ်ပျက်မှုရှိမရှိငါစစ်ဆေးပြီးမနက်ဖြန်ငါထပ်ရေး ဦး မယ်၊ အဲ့ဒီအတောအတွင်းမှာဒါကစိတ်ငြိမ်သက်မှုပေးတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဆဲလ်ဖုန်းပြproblemနာဖြစ်ရင်ငါအရမ်းရယ်ရတယ်။
Johanna glez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် galaxy s7 နှင့်သုံးလအသုံးပြုထားပြီးမျက်နှာပြင်အနီရောင်ပြောင်းသွားသည်။ ၎င်းသည်အဓိကပြproblemနာဖြစ်ပါသလား။
Johanna glez အားပြန်ပြောပါ
Daniel Iglesias ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ဆိုးဆိုးရွားရွားစတင်ခဲ့ပြီဆိုလျှင် screen ပေါ်ရှိပန်းရောင်လိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားသောတတိယမြောက် S7 အစွန်းကိုငါသွားပြီး Samsumg သည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ နောက်ဆုံးသူတို့ကကျွန်တော့်ကို SMS ပို့ပေးသည်မှာသူတို့သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ။ လိမ်။ ဝပြီ။ ယနေ့တိုင်အောင်ငါ့ကိုမခေါ်ကြ။
Daniel Iglesias အားပြန်ပြောပါ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့ xperia ကွန်ပျူတာကနေ့အတူတူဘဲ၊ အနီရောင်ကနေပုံမှန်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့မျက်နှာပြင်တူတူပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့ xperia ကွန်ပြူတာကတူညီတဲ့ကိစ္စကိုတင်ပြနေလို့ပါ။